Mia: Fanamarihana momba ny asa eo an-toerana, ny tsy fivadihana ary ny CRM | Martech Zone
Talata, Jolay 11, 2017 Douglas Karr
Mia, avy ao amin'ny Signpost, dia mizaha ny angon-drakitra momba ny mpanjifa an-tapitrisany maro hahitana fotoana vaovao handefasana ireo hafatra mety amin'ny fotoana mety. Ity teknolojia miorina amin'ny AI ity dia mamorona mailaka sy lahatsoratra izay setren'ny mpanjifanao, mampitombo ny varotrao 10% ary hampiakatra ny naotinao amin'ny isa kintana roa eo ho eo.
Manantona ny mpanjifa i Mia mba hijery raha toa ka manome sosokevitra ny orinasanao izy ireo ary, raha toa ka eny izy ireo dia manaraka fampahatsiahivana izy mba hamela kintana dimy amin'ny tranokala dinihina.
Amin'ny fanangonana mailaka, nomeraon-telefaona ary data momba ny fifanakalozana, fantatr'i Mia ny tolotra izay ankafizin'ny mpanjifanao indrindra. Nahazo tolotra arahaba ny mpanjifa vaovao ary mahazo valisoa ireo mpanjifa tsy mivadika amin'ny asany hatrany. I Mia aza dia mandrisika ny fandraisana anjara amin'ny programa fanovozana noforonina ho an'ny orinasanao fotsiny.
Mamakafaka ny asan'ny kaonty anao koa i Mia ary mandefa sosokevitra ho an'ny fampielezan-kevitra manaraka. Azonao atao ny mandray tanana ary avelao i Mia hiasa ho anao. Isan-kerinandro i Mia dia handinika ny hetsika natao tato ho ato ary handefa tatitra momba ny isan'ny fifandraisana vaovao nampiana, izay nanome famerenana 5-kintana ary iza amin'ireo mpanjifanao no niverina indray. Azonao atao ny manara-maso ny fahombiazanao nefa tsy mitsidika ilay tranonkala mihitsy.
Fanampin-javatra fanampiny Mia
Customization - fampielezan-kevitra amin'ny mailaka, tranonkala famolavolana ary famerenana.
Feedback - Araho sy zahao ny naotin'ny mpanentana anao (NPS) manerana ny toerana rehetra misy anao. Makà hevitra momba izay mandeha sy izay mety mila fanatsarana.
Integration - Signpost's API mamela anao hampifangaro ireo rafitrao ankehitriny ao anatin'ny minitra vitsy.
Fanarahana mividy - Alefaso ny fanarahana ny fividianana mividy hanidiana ny ezaka amin'ny varotrao. Ny angon-drakitra momba ny fifanakalozana dia hanandratra ny hafatrao amin'ny hafatra, manome fifandraisana marina 1: 1
Hafatra an-tsoratra - Miaraka amin'ny 8x fifandraisan'ny mailaka, i Mika koa dia mifampiresaka amin'ireo olona manantena anao sy mpanjifanao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra.
Serivisy manam-pahaizana Indraindray dia te-hiresaka amin'ny olona ianao. Vonona hanampy ny ekipanay raha mila izany ianao.
Vokatry ny vokatra ara-barotra amin'ny varotra eo an-toerana sy ny signpost
Tags: toekarena ao an-toeranacrm orinasa eo an-toeranaseo eo an-toeranasari-Fanamarihana an-tseraseranaotyhevitra
WordPress: Manorata kaody fohy avy amin'ny lohahevitra ho an'ny ray aman-dreny amin'ny lohahevitry ny zanakao